Kurasikirwa kwemahombekombe: Musikana anorexic anoratidza mifananidzo asati asvika uye pashure pokunge apora uye akazova akanaka kwazvo - HEALTHY MORE MAG - TELES RELAY
HOME » MAZANO »Kurasikirwa kweutema: Musikana anorexic anoratidza mifananidzo asati apedza kuporesa uye akazova akanaka kwazvo - SANTE PLUS MAG
kugashira / Psycho & Sexuality /
Kurasikirwa kwemahombekombe: Musikana anorexic anoratidza mifananidzo asati asvika uye pashure pokunge apora uye akava akaisvonaka kwazvo
Anorexia chirwere chinokanganisa vanhu vazhinji, kunyanya vasikana nevasikana vechidiki. Kunyange zvakadaro kusina kusimba uye mukutsvaga chizivikanwe, avo vekupedzisira vanowanzobvumirana nehutano uhwu hunozove hwechokwadi hwechirwere chepfungwa. Uyewo anozivikanwa sechirwere chekudya, anorexia ine ngozi chaiyo. Kuti apupurire, Emelle Lewis anodzoka pamarudziro ake kugehena uye kurwisana nechirwere chisingadi kuti vataure. Nyaya yake inodhindwa na Dailymail.
Maererano neInserm, anorexia yaizogadziriswa kakawanda pakati pe14 nemakore 17, ine chikwata chapamusoro chakazosvika makore gumi nemana. Zvinotungamirirwa nechinangwa chekunaka nekuonda, chirwere ichi chiri chechikadzi, kunyange hachiregi varume vangave vaimiririra10% anorexic varwere. mu Furanzi1,4 3,5% yevadzidzi muParis yaizobatwa uye huwandu hwe3000 6000 hurumende itsva huchaonekwa gore negore.
Anorexia: ungazviziva sei?
Anorexia inoratidzirwa nokuzvidira uye kuregererwa kunoshandiswa muzvokudya. Inogona kupedza mwedzi mishomanana asi inogonawo kupera kwemakore mazhinji, sezvakaitwa naEmeelle Lewis. Yakabatana zvikuru nehutano hwepfungwa hwemunhu akabatwa, anorexia inogona kuvanzwa kubva kune vadikanwa pasi pekufungidzira kwekutevera kudya kana chirwere chenguva pfupi. Saka, theInserm inotora zviratidzo izvo zvakakosha kubhadhara kutungamira chero munhu upi zvake angatambura:
• Ungadya sei
· Kurema (BMI <17.5kg / m2)
· Kuziva kwega
· Kusasa kwemitemo kubvira pamwedzi we3
· Kuwedzera kukura
Sezvaunotarisa, zviratidzo izvi ndezvomunhu oga uye saka zvinoda kushamwaridzana zvikuru nemunhu akabatwa. Nokuda kweizvi, rubatsiro rwemhuri runokosha. Sezvakanotsanangurwa nemapfungwa Sophie Criquillion au Figaro, anorexia "ndiyo yechipiri inokonzera rufu rwevechiri kuyaruka, zvichida kuburikidza nokushaya zvokudya zvinovaka muviri kana kuzvisungirira ". Uyezve, uyu angave ane simba rakanyanya rekuita zvepabonde iro rinogona kukonzera kazhinji avo vane anorexic kuti vanzwe vachinetseka nemafungiro avo. Nokudaro, zvinokosha kuti uise mhuri iyo mukurapa pahutano hwekudzivisa kuporesa.
Uchiri kuyaruka hwakavhiringidzika
Muchipupuriro ichi chinoshungurudza, mupukunyuka we anorexia ane makore anonzi 22 anongomutsanangurira dambudziko rake rakatanga mumakore ekuyaruka. Zvose zvakatanga apo Emelle Lewis, makore 7 apfuura, akaona kuzvidzora kwake uye chivimbo chake chichikurumidza kupera. Yakapoteredzwa neshamwari dzakaita sehupenyu dzakazara nerudo, vaduku kuyaruka iri kubvunza muviri wake waanofunga kuti ane mhosva yekusakwanisa kuwana mukomana naye. Achizviwana pachake "akaipa uye mafuta," anosarudza kushaya nzara kusvikira asvika kurema kunotyisa kwe32 kilos.
Kunyatsoshandiswa pakurapa, Emelle achawana paranoia kwemakore anoverengeka apo achinyengetedzwa kuti ave akabatwa nechinangwa chokuparadza upenyu hwake. Zvechokwadi, sezvo muviri wake wakanyatsogadziriswa, musikana uyu akanga asingazivi kuti hutano hwake hwaiva pangozi. Mumaziso ake, aive akakwanisa zvakakwana kutungamirira hupenyu hune hupenyu, kunyange paine eisiisie, mamiriro ekuderera zvakanyanya. Anowedzera kuti dambudziko rake bedzi raizove riri chando, icho chakanga chirwadza nekuda kwehurombo hwake.
Kune rumwe rutivi, akatovuya kuzotaura kuti aida kuratidza kuti haana kudya zvakakwana, izvo zvaisanganisira kudya zvakafanana zvokudya zvezuva rimwe nerimwe, kureva gorosi zviyo bhisikiti, hummus, keke keke, saladi uye michero asati avata nguva.
Izvo chete pazera remakore e22 kuti kubhakwa kuchaitika, apo Emelle achawana mazana ezvipupuriro kubva kune vakaponaAnorexie iyo iripo paIndaneti. Nokutevera nhoroondo dzavo dzekugarisana, hutsinye hwemhosva yake hunozopararira uye hunozarura maziso ake kune ngozi yerufu inomumirira. Akatsunga kuzvidzora, anotendeukira kumusana anosimbiswa naamai vake vanotsigira nhanho dzose dzehutano hwavo, kusanganisira dzakawanda zvekudzokorora zvinogadziriswa ne7 inogara muchipatara.
Nenzira yakanaka, nekuda kwesimbi yekuda uye kutsigirwa kwemhuri yake, kunyanya iyo yeamai vake, musikana wechidiki haazongogoni kuita chinangwa chake chete asi kuvaka hutano hwakanaka uye hwakanaka.
Nhasi, anoti anonzwa akasimba zvikuru uye anokurudzira vanhu vose vari mumamiriro ezvinhu akafanana kuti vaende kuchido chokubuda mugomba uye kuti vasateerere mazwi ane utsinye anokonzera matambudziko ekudya.